Novena an'ny bonus Krismasy, firaisana amin'ny fianakaviana | Fitsangatsanganana tanteraka
La Strenna Novena Izy io dia iray amin'ny Fomban-krismasy manan-danja indrindra ary miorim-paka lalina Kolombia. Malaza be koa izy io any amin'ny firenena amerikana tatsimo hafa, toa an'i venezoela na ekoatera. Mihoatra ny fisehoan-javatra ara-pivavahana fotsiny ny maha-zava-dehibe azy, lasa hetsika ara-tsosialy ary fombafomba natokana ho an'ny firaisana amin'ny fianakaviana.
Mandritra ny Advento, mandritra ny sivy andro (ny 16 ka hatramin'ny 24 desambra, tafiditra ao), dia miara-mivory ny fianakaviana avy amin'ny lafivalon'ny firenena miara-mivavaka sy mihira hira Krismasy. Ny teboka fihaonana dia ny Scère de la Nativre foana na ny Scère de la Natique, miorina amin'ny toerana afovoan'ny trano. Ny teny hoe "fahasivy" dia avy amin'ny sivy andro. Famantarana mialoha ny Krismasy.
1 Ny niandohan'ny Novena of Aguinaldos
2 Mivavaka amin'ny Novena
Ny niandohan'ny Novena of Aguinaldos
Ity fomban-drazana katolika tsara tarehy ity dia teraka tany amin'ny tany amerikanina, tamin'ny andron'ny fanjanahantany. Marina izany Fray Fernando de Jesús Larrea, mpivavaka Franciscan teraka tany Quito, izay hanomboka ity fanao ity. Nanomboka tamin'ny 1725 izany, taorian'ny nanendrena azy ho pretra. Ny hevitra mivavaka eo akaikin'ny nahaterahan'i Jesosy zaza nandritra ny sivy andro talohan'ny Krismasy dia nandray tsara ireo mpivavaka.
Na izany aza, ny fomba ankalazan'ny fianakaviana ankehitriny ny Aguinaldos Novena any Kolombia dia vokatry ny fanovana nataon'ny reny Maria Ignacia, tamin'ny faran'ny taonjato faha-XIX. Izy no nanome an'ireto vavaka ireto endrika endrika kanônika, nanampy koa ny fifaliana, izay no iantsoana ireo hira izay mifanelanelana amin'ny vavaka sy ny vavaka.
Ary na izany aza, tsy nisy na dia iray aza ny Novena de Aguinaldos mbola velona mandraka androany, fa maromaro. Ny sasany resahina amin'ny teny espaniola taloha, somary efa antitra ary lavitra ny fahatsapana ankehitriny, mampiasa, ohatra, ny endrika "vos" manaja. Ny hafa kosa, novaina mba hanavaozana ilay fehezanteny amin'ny fiteny maoderina.
Tsara ity Video ny hevitry ny vavaky ny Novena de Aguinaldos ao amin'ny fiarahamonina Kolombiana dia fintino tsara:
Araka ny hitanao, ho an'ny Kolombianina, ny Novena de Aguinaldos dia tsy fombafomba ara-pivavahana fotsiny, fa antony hanamafisana ny fifamatorana eo amin'ny namana sy ny fianakaviana. ny Gastronomy Krismasy ary ny mozika tsy diso anjara tamin'io fotoana io koa izy ireo.
Mivavaka amin'ny Novena
Na eo aza ny feony tsy misy ahiahy sy ny toetrany mahazatra, ny Novena de Aguinaldos Izy io dia lanonana manaraka ny torolàlana sy fitsipika voafaritra tsara. Manomboka amin'ny 16 desambra foana ary mifarana amin'ny alin'ny Noely. Any amin'ny trano sasany dia mivavaka alohan'ny sakafo hariva ny vavaka, fa ny sasany kosa avela ho avy eo.
Ny Novena avy any Strenna dia ankalazaina ankohonana
Ny hevitra ao ambadik'io fombafomba io dia ny fahatsiarovana ireo volana talohan'ny nahaterahan'i Jesosy, vanim-potoana izay miafara amin'ny fahaterahany tao Betlehema. Neny María Ignacia, izay nanara-penitra ny fomba fivavahana amin'ny olona nova, no nanangana ny filaharana fehezanteny toy izao manaraka izao:
Voalohany ny Vavaka isan'andro, manaraka am-pahatokiana ny lahatsoratra tany am-boalohany Fray Fernando de Jesús Larrea. Taorian'ity famakiana ity, ny "Voninahitra ho an'ny Ray".
Arahana izany avy eo miaraka amin'ny fandinihana ny andro. Misy iray isaky ny sivy andro.
La vavaka ho an'ny Virjiny Masina tonga manaraka, arahin'ny vavak'i Salama Maria sivy (iray ho an'ny tsirairay amin'ireo nova).
Avy eo dia anjaran'ny vavaka ho an'i Masindahy Josefa, izay vakiana isan'andro ihany koa. Ny famakiana dia mifarana amin'ny vavaka telo: ny "Rainay", ny "Arahaba Maria" ary ny "Voninahitra ho an'ny Ray."
ny Fifaliana na fientanam-po amin'ny fahatongavan'i Jesosy zaza mandrafitra ny ampahany mozika velona indrindra amin'ny novena. Misy feo mitanisa ireo hira, izay amalian'ny amboarampeon-kira matetika.
Aorian'izany dia tonga ny vavaka amin'i Jesosy Ankizy, izay amin'ny lafiny iray dia ny ampahany fototra amin'ny fahasivy. Taorian'io dia nanararaotra namorona ny fangatahan'izy ireo tamin'i Jesosy zazakely ireo mpandray anjara, amin'ny ankapobeny maniry ny fahasalamana sy fanambinana ho an'ny trano sy ny fianakaviana.
Ny fahasivy dia mifarana amin'ny fehezanteny farany, izay saika mazàna ho Rainay sy Voninahitra ho an'ny Ray.
Ireo vavaka sy hira ireo dia tsy maintsy tononina isaky ny sivy andro. Ho ohatra iray izay efa voalaza etsy ambony, ity no lahatsoratra tany am-boalohany nataon'i Fray Fernando de Jesús Larrea izay natomboky ny andiany tsirairay amin'ny Novena de Aguinaldos:
«Andriamanitra mendrika indrindra amin'ny fiantrana tsy manam-petra, izay tena tia olona tokoa, ka nanome azy ireo ny zanakao ny fanomezana tsara indrindra ny fitiavanao ka, nahatonga ny olona ho eo an-kibon'ny virijina, dia hateraka ao amin'ny fihinanam-bilona ho an'ny fahasalamana sy ny fanafody . Izaho, amin'ny anaran'ny olombelona mety maty rehetra, dia misaotra anao tsy misy fetra noho ny tombom-barotra lehibe toy izany; ary ho valiny any aminy dia atolotro anao ny fahantrana, fanetren-tena ary toetra tsara hafa an'ny zanakao lahy, niangavy taminao noho ny fahamendrehany masina, noho ny tsy fahazoana aina nahaterahany, sy ny ranomaso nalatsaka tao am-fihinanam-bilona, ​​izany hoe ianao manary ny fonay amin'ny fanetren-tena lalina, amin'ny fitiavana mirehitra, amin'ny fanamavoana tanteraka ny zava-drehetra eto an-tany, mba hananan'i Jesosy zaza ao am-bohony ao aminy ary honina mandrakizay. Amena ".
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Novena bonus Krismasy, firaisana amin'ny fianakaviana